Bank Shooter Apk Download For Android [Billiard Bhora Hack] - Luso Gamer
Bank Shooter Apk Download For Android [Billiard Bhora Hack]
Kutamba Mitambo yeBilliard kwaigara kuchinakidza. Kune vatambi vanoda kuisa mutsetse mabhora ese ebhiridhi mumakomba etafura pasina kusvibisa. Saka iwe unoda kutamba wakasarudzika mutambo asi usinga jairane nemakona wobva waisa Bank Shooter.
Chishandiso chatiri kumiririra pano ndechechitatu bato rinotsigirwa Android Apk faira. Kubatanidza iyo chaiyo Hacking Tool mukati smartphone inobvumira vatambi. Kutonga plus kunakidzwa nemahara mutambo uri nyore kune chero mupikisi.
Kunyangwe kuisa uye kushandiswa kwekushandisa kunoonekwa sekwakaoma. Asi usazvinetse nekuti pazasi pano tichatsanangura ese anodiwa matanho muchidimbu. Saka iwe unoda iwo maficha ekushandisa uye akagadzirira kutora mukana wobva waisa Apk.
Chii chinonzi Bank Shooter Apk
Bhengi Shooter Android ndeye yepamhepo bato rechitatu rinotsigirwa smartphone chishandiso chakagadzirwa chakatarisana nevanoda mutambo wemabhiridhi. Chinangwa chekugadzira app ndechekupa yakachengeteka yakavanzika nzira. Izvo zvinobvumira vatambi kuti vanakirwe yakazara yakabatsirwa gameplay yemahara.
Kunyangwe kutamba uye kunakidzwa nemitambo yakadaro kwaigara kuri chiitiko chakasiyana. Iko vatambi vanoda kuisa mabhora ese mumakomba ekuona pasina kuita zvibodzwa. Kare mutambo uyu waingopihwa nevanhu vane mari chete.
Asi ikozvino vanhu vepakati vanogonawo kutamba mutambo wacho mahara. Ehe, iko zvino kuisa yakakurumbira bhora 8 mutambo mukati menhare kunobvumira vanoisa kunakidzwa nemhando dzese dzemitambo yemabhiridhi mahara. Asi kana tikataura nezvevanopikisa saka kutamba kekutanga kunoita kuti zviome.
Nekuti neunyanzvi hwakaderera, zvinoita sekunge zvisingaite kutsigira vachipesana nevatambi. Naizvozvo kutarisa rubatsiro rwemutambi. Vagadziri vanozopedzisira vadzoka neichi chinoshamisa chishandiso. Izvo hazvisi kungobatsira mukati memutambo wekutamba asi zvinogona kubatsira mukuvandudza hunyanzvi.
zita Bank Shooter
zera 9.56 MB
Package Zita com.tksgames.bankshooter
Paunenge uchinge wakwanisa kunzwisisa hunyanzvi hwekutamba. Ipapo hapana anogona kukwanisa kukunda vatambi mukati memutambo. Rangarira mukati me snooker angle uye kusarudza kwetsvimbo kunonyanya kukosha. Kunyangwe iyo hit pressure uye kuiswa kwebhora kunopawo yakananga mhedzisiro.
Kana vatambi vakasarudza kona isiri iyo ine imbalanced hit point. Ipapo pane kutora mukana, unogona kupedzisira warova bhora risiri iro. Nekuda kweiyi sarudzo yakaipa, iyo yese gameplay inogona kushandura chiyero uye maitiro ekutamba.
Kana isu tichiongorora iyo application uye nekuiisa pane akasiyana mafoni. Takaiona yakapfava uye iri nyore maererano nekushandiswa. Chekutanga, vashandisi vanoda kudhawunirodha yazvino vhezheni yekushandisa iyo inosvikika kuwana kubva pano.
Kana iyo yekumisikidza yapera, ikozvino bvumidza dzimwe mvumo dzekutanga uye tanga kusangana nesarudzo dzakasiyana. Rangarira shanduro yatiri kutsigira pano yakagadziridzwa chete. Iko iyo premium sarudzo dzakavhurwa chete uye dzinosvikika kushandisa.
Iwo ma pro maficha anosanganisira otomatiki Kuwedzera Mazano, AI Image Recognition uye Yakazara Bank Shoot Tsigiro uchitamba. Pamusoro pezvo, sarudzo dzese dzataurwa dziri pamutemo uye hadzina mhedzisiro yakananga pamutambo. Kana iwe uchifarira chishandiso wobva waisa Bank Shooter Dhawunirodha.
Chishandiso chakasununguka kurodha.
Yechitatu-bato kushambadzira inorambidzwa.
Premium maficha akavhurwa kuti ushandise.
AI Image Recognition yekufungidzira kwekona.
Auto Kuwedzera mitsetse kuchabatsira kutonga bhora kurova.
Uye Bhangi kupfura kuchabatsira mukutora pfuti yakakwana.
Hapana dambudziko rekurambidza.
Maitiro ekurodha Bank Shooter App
Kana isu takataura nezve kurodha yazvino vhezheni yeApk mafaera. Vashandisi veAndroid vanogona kuvimba nemawebhusaiti edu nekuti pano tinongopa echokwadi uye epakutanga mafaera. Kuita chokwadi chekuti vashandisi vanovaraidzwa nechigadzirwa chakakodzera.
Takahaya timu yenyanzvi inoumbwa nenyanzvi dzakasiyana. Kunze kwekunge timu ine chokwadi chekushanda kwakanaka isu hatimbope iyo Apk mukati yekurodha chikamu. Kuti utore vhezheni yakagadziridzwa yefaira reapp ndapota tinya pazasi-rakapihwa link.
Kune akawanda mamwe maturusi ekubira anowanikwa online. Izvo zvinopa akafanana maficha uye mamwe masevhisi emahara. Asi muchokwadi, izvo zvine njodzi kushandisa uye zvinogona kukumbira zvibvumirano zvisina basa. Nekudaro, isu takaisa iyo app uye hatina kuwana dambudziko rakananga.
Pano pawebhusaiti yedu takatoburitsa akawanda ekubira maturusi. Izvo zvinokatyamadza uye zvine muchero kushandisa muchokwadi. Kuisa uye kuongorora iwo maapplication ndapota tevera maURL. Ndivo Scout Apk uye Fona Logi Monitor Pro Apk.
Saka iwe unoda kutamba billiard mutambo neshamwari uye nhengo dzemhuri. Zvakadaro agara akaora mwoyo mushure mekurohwa nevamwe vatambi. Saka urikusangana nedambudziko guru iri mukati memutambo nekuda kwekushaya hunyanzvi. Wobva waisa Bank Shooter Apk uye unakirwe asingagumi ekutanga maficha emahara.
Categories Tools, Apps Tags Bank Shooter, Bank Shooter Apk, Bank Shooter App, Bhangi Shooter Download, Hacking App Post navigation
Omohak TV Apk Dhawunirodha Ye Android [Itsva]